Khulisa iTraffic Ngokusebenzisa Izikhathi Zokushicilela | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 17, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Njengoba saqhubeka sisebenzela ukwandisa traffic ngonyaka odlule, enye yezindawo esizihlolisise kahle kwakuyisikhathi sosuku esasishicilela ngaso okuthunyelwe kwebhulogi. Iphutha elenziwa ngabantu abaningi ukubheka nje ithrafikhi yabo ngehora bese bekusebenzisa njengesiqondisi.
Inkinga ukuthi ukubuka ithrafikhi ngehora kufayela lakho le- analytics ibonisa kuphela ithrafikhi endaweni yakho yesikhathi, hhayi indawo yombukeli. Lapho siqhekeza ithrafikhi yethu ngezindawo zesikhathi, sathola ukuthi isipikha sethu esibaluleke kakhulu kuthrafikhi kwakuyinto yokuqala ekuseni. Njengomphumela, uma sishicilela ngo-9AM EST, sesivele sesihambile isikhathi. Uma ngabe isayithi lakho noma ibhulogi yakho isenkabeni, ePacific noma kwezinye izindawo zesikhathi… uzofuna ukuhlela okuthunyelwe okuzoshaya ngo-7: 30 ekuseni kuye ku-8AM EST ukushayela ithrafikhi eningi nokwabelana nomphakathi.
Ngokunjalo, njengoba sibheke ukushicilela okuthunyelwe ntambama, sidinga ukuqinisekisa ukuthi asikwenzi ngemuva kuka-5PM EST, uma kungenjalo abantu abaningi ngeke bakubone okuthunyelwe kuze kube ngakusasa. Ukube besizoshicilela okuthunyelwe okungu-3 ngosuku, besizofuna ukukushicilela ngaphambi kwesikhathi kunokwengeza ukuvezwa kokuqukethwe kwethu. Uma usendaweni yesikhathi sasePacific, uzofuna ukushicilela phakathi kuka-4: 30 AM PST no-2PM PST! Ngakho-ke… ufunde kangcono ukuthi ungahlela kanjani okuthunyelwe ngaphandle kokuthi ufuna ukulala kancane!
Izibalo Zamazwe Ngamazwe Zokuthumela Imiyalezo
Okthoba 17, 2011 ngo-9: 33 AM
Iklayenti lisanda kubuza ukuthi isikhathi esikahle kakhulu sokwabelana ngokuqukethwe. Umbuzo omuhle futhi uyahlukahluka ngokuya ngezithameli ezihlosiwe. Uma uhlangabezana nesixuku sasekolishi, baphequlula iwebhu ngezikhathi ezahlukahlukene kunezi-9-5'ers. Ukubheja kwakho okuhle ukwenza ukuhlolwa ukuthola ukuthi yini okusebenza kahle kakhulu.
Okthoba 17, 2011 ngo-10: 29 AM
UNick - uqinisile impela. Ngokuphelele kuncike ezilalelini! Ngibona nje abanye abantu bengazinaki izindawo zesikhathi futhi bengaboni ukuthi kukhona ukuphazamiseka kuthrafikhi njengoba sisuka kuzoni siye endaweni.
Okthoba 17, 2011 ngo-10: 46 AM
Isihloko esihle futhi siyahambisana nesikubonayo. Usizwa kangcono ukuthumela ngaphambi kwethrafikhi yansuku zonke kunangesikhathi.
I-Oct 17, i-2011 ku-9: i-49 PM
Ngikubonile ukubandakanyeka okungcono kwenzeka ekuseni. uma ngihlela ama-tweets ami noma izibuyekezo ze-facebook zebhizinisi lami noma amaklayenti ami. Siyabonga ngokwabelana ngale Doug.